I-Prescott Cabin kufutshane neKlabhu Yeentaba - I-Airbnb
I-Prescott Cabin kufutshane neKlabhu Yeentaba
Le ndlu yamaplanga, eyilwe ngumyili wezakhiwo uGeorge Christensen, yindawo yokuphola yakudala edolophini. Ikufutshane neendawo ezininzi zokunyuka intaba kwi-Prescott National Forrest. Indlu yamaplanga esecaleni kweKlabhu Yeentaba enembali, iyakhawuleza ukuya kwidolophu. Qaphela, kukho indawo yokupaka imoto enye okanye ezimbini kwindlu yamaplanga; kukho indawo yokupaka eyongezelelekileyo kwindawo eninzi kwi-White Spar Rd. Indlu yethu yamaplanga izilungele izilwanyana zasekhaya ngemali encinci. Izinto ezenziwe ngamaplanga zenza indlu yamaplanga ibe nothuli ukuze ezo zine-aleji zizikhathaze. Kufuneka ukhwele izitepsi ukuze ungene.
Le yindlu yamaplanga eyahlulwe phakathi. Umgangatho ophezulu yindlu yamaplanga eyakhiwe ngohlobo lwe-Lincoln eyayiboniswa kwi-Prescott Square ngexesha ledolophu yase-Prescott. Umgangatho ophezulu unekamera enkulu, ibhafu, kunye nendawo yokufunda ngoxa umgangatho waphantsi unelinye igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
Indlu yamaplanga ihleli ngaphandle kwePrescott Mountain Club enembali, ekwimayile ukusuka kwidolophu yasePrescott. Iklabhu Yasezintabeni yeyona ndawo endala ecetyiweyo yaseArizona kwaye iziqhayisa ngeendlela ezintle zemithi yepine ezihamba phambili kwixesha elahlukileyo. Ukuqeshisa ixesha elifutshane akuvumelekanga kwiKlabhu Yeentaba. Kodwa ekubeni indlu yethu yamaplanga ingaphandle nje kwemida yeKlabhu Yeentaba, unokonwabela le ndawo intle xa utyelele ePrescott.
Kukho umphathi wendlu onokufikeleleka kuzo naziphi na iimeko zongxamiseko.